manicure set ပေးသွင်းသူများနှင့် စက်ရုံ - China manicure set ထုတ်လုပ်သူများ
သားရေအိတ်ဖြင့် လက်သည်းညှပ် 16 ခု၊ လက်သည်းညှပ်အစုံ၊ တစ်ကိုယ်ရည်ထိန်းသိမ်းမှုကိရိယာ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအတွက် လက်ဆောင်များ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 16pcs Professional Manicure Set / Nail Clippers Kit/ Pedicure Care Tools/Stainless Steel Grooming Kit ယောက်ျား&အမျိုးသမီး၊ PU Leather Case ၊ အပြာ/အနက်/ရွှေရောင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လက်သည်းခြေသည်းလက်သည်းအစုံ (16 Pieces)- Professional Manicure Kit တွင် လက်သည်းခြေသည်းလက်သည်း ကိရိယာ 16 ခု ပါရှိသည်။ လက်ထိန်းခြင်း၊ မျက်နှာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ခြေဖဝါးထိန်းသိမ်းခြင်း အပါအဝင် လုပ်ဆောင်ချက်များ။ဤ Manicure Pedicure အစုံသည် သင်လိုအပ်သမျှ ရှိပါသည်။100% Stainless Steel အရည်အသွေးမြင့် ကိရိယာများ- လက်သည်းခြေသည်း နှင့် ခြေသလုံးထိုးကိရိယာများကို ကျွမ်းကျင်ခွဲစိတ်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်...
ဖောင်ဒေးရှင်း Blush Concealer အတွက် ပရီမီယံ အလှကုန် ဘရက်ရှ် Set 11pcs Eyeshadow မျက်ခုံးမွေး ပေါ်လွင်သော ပန်းရောင် မိတ်ကပ် ဘရပ်ရှ်
Brush Material: Synthetic hair မူရင်းနေရာ: Zhejiang,china အမှတ်တံဆိပ်အမည်: OEM/ODM မော်ဒယ်နံပါတ်: BRS0100PB အသုံးပြုမှု- မျက်နှာ၊ BLUSHER၊ CONCEALER၊ Eyebrow Pencil၊ Eyeliner၊ Lip Liner၊ Mascara၊ Eye Shadow၊ FOUNDATION၊ Lip Balm၊ Lip Gloss၊ နှုတ်ခမ်းနီ၊ Shaving Brush တစ်ခုလျှင် ပစ္စည်း- 11pcs လက်ကိုင်ပစ္စည်း- Wood Handle Feature အရေပြားနှင့်လိုက်ဖက်သော၊ နူးညံ့သောအမွေးအမှင်များ အားသာချက်- စူပါပျော့ပျောင်းသောနိုင်လွန်ဆံပင်ဖြီးပုံစံ- Angular Blush၊ Flat Brush၊ Smudge Brush၊ Fan Brush၊ Foundation Brush ထုတ်ကုန်အမည်- မိတ်ကပ် ခ...
17 in 1 သားရေလက်သည်းခြေသည်းလက်သည်းလိမ်းဆေး အစုံ
1. စတိုင်ကျစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဖက်ရှင်လက်သည်းညှပ်အစုံ၊ အစုလိုက် လက်ကားရောင်းချခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ စတော့အိတ်အတွင်း/အမြန်ပို့ခြင်း
2. Professional Nail Clippers Set သည် လှပရုံသာမက လက်တွေ့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ အရေပြားနှင့်လိုက်ဖက်သောပစ္စည်း၊ လူတိုင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်လက်သည်းခြေသည်းလက်သည်းညှပ်သမားများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
3. အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဖက်ရှင်လက်သည်းညှပ်အစုံ၊ လက်သည်းကိရိယာသည် စတိုင်ကျပြီး တာရှည်ခံကာ ထိထိမိမိသက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။
4. လက်သည်းခြေသည်းညှပ်ခြင်းအတွက် သင်နေ့စဥ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သမျှအပါအဝင် ဤလက်သည်းညှပ်ကိရိယာအစုံအလင်။ ကိရိယာအစုံအလင်၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
5. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် အိမ်သုံး၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ လက်ဆေးဆိုင်၊ ခြေသလုံးဆိုင်၊ စသည်ဖြင့် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများအပါအဝင် လူများအတွက် သင့်လျော်သော၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းကို လက်ခံပါ။
6. အနက်ရောင်စတုဂံ PU သားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အပြင်ပိုင်းသည် အလွန်ထူးခြားပြီး ဆန်းကြယ်မှုအပြည့်ရှိသည်။
7. အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ဘေးကင်းစွာ ပိုးသတ်နိုင်ခြင်း၊ တိုက်စားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ပိုးဝင်နိုင်ခြေကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
8.MUTIL-FUNCTIONAL- လက်သည်းခြေခြယ်ခြင်း၊ လိမ်းခြယ်ခြင်း၊ ဝက်ခြံထွက်ခြင်း ၊ အရေပြားပေါ်တင်ခြင်း ၊ မျက်ခုံးပုံသွင်းခြင်း။
9. အိမ်ခရီးအတွက် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း။
15pcs Professional Manicure Set ခြေသည်းလက်သည်းအစုံ Stainless Steel Feet Care Tool Set
* သာလွန်အရည်အသွေးရှိသောပစ္စည်း- ကျွန်ုပ်တို့၏လက်သည်းဖိုင်များကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည့် emery ၏အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
သင့်အား သက်တောင့်သက်သာရှိသော လက်သည်းပြုလုပ်ခြင်း အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းသည်။
* အလွန်ပါးလွှာသော ဒီဇိုင်း- ဤပေါ့ပါးသော လက်သည်းဖိုင်များသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေသည်။အလင်းဖိအားကို နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် ရလဒ်များကို ချက်ချင်းမြင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကွေးမည်မဟုတ်ပါ။
* Double-Sided Emery Boards- ဤလက်သည်းကြားခံများသည် လက်သည်းများ၊ ခြေသည်းများ၊ သဘာဝလက်သည်းများ၊ acrylic လက်သည်းများ၊ အတုအယောင်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
လက်သည်းစသည်ဖြင့် နှစ်ဘက်ခြမ်း emery ဘုတ်များ။
* Salons နှင့် Home အတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်- ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရည်အသွေးရှိ လက်သည်းဖိုင်များသည် သင့်လှပသော acrylic၊ သဘာဝနှင့် အတုအယောင် လက်သည်းများကို ထိန်းသိမ်းရန် ကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ပေးပါသည်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အလှပြင်ဆိုင်များနှင့် DIY လက်သည်းပန်းချီများကို အိမ်တွင် သင်ရနိုင်သည်။
IZLA7in 1 သံမဏိလက်သည်းခြေသည်းလက်သည်းခြေသည်းလက်သည်းခြေသည်းလက်သည်းခြေသည်းလက်သည်းအစုံပါသော လက်သည်းခြေသည်းလက်သည်းညှပ်များ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်သည်းညှပ်အစုံ
များစွာသောလုပ်ဆောင်ချက်7တွင် 1 လိမ်းဆေးကိရိယာ- လုပ်ဆောင်ချက် လက်သည်းညှပ်အစုံသည် လက်သည်းများကို ဖြတ်တောက်ခြင်းအပေါ် ဗဟိုပြုထားပြီး၊ ကိရိယာတစ်ခုစီကို သေသေသပ်သပ်ပြုလုပ်ထားပြီး နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် သင်၏ဂရုစိုက်မှုလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်၊ လက်ထဲတွင် အစုံလိုက်ဖြင့် သက်တောင့်သက်သာနေထိုင်နိုင်သည်။
100% Stainless Steel အရည်အသွေးမြင့် ကိရိယာများ- လက်သည်းခြေသည်းနှင့် ခြေသလုံး တန်ဆာပလာများကို Stainless Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ဤ set သည် ခိုင်ခံ့ပြီး ကြာရှည်စွာ တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ဘေးကင်းစွာ ပိုးသတ်နိုင်စေရန်၊ သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ပိုးဝင်နိုင်ခြေကို နည်းပါးစေပါသည်။
Travel Portable Leather Case : ခရီးသွားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အိမ်မှာနေရင်း နေရာမလွတ်တဲ့ လက်သည်းခြေသည်းအစုံကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလား။လက်ကိုင်အိတ် ၊ ကား ၊ ခရီးဆောင်အိတ် ၊ ရုံးစသည်ဖြင့် ၊ ခရီးထွက်ရန် ၊ အိမ်တွင်ဖြစ်စေ ၊ အိမ်တွင်ဖြစ်စေ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နေရာတိုင်းတွင် ထားနိုင်စေမည့် အရွယ်အစားဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော IZLA ခြေသည်းခြေသည်းအစုံကို တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်- Manicure Tools များသည် လှပသောထုပ်ပိုးမှုပုံစံဖြင့် လာပါသည်။အိတ်ကို အရည်အသွေးမြင့် အထည်နှင့် PU သားရေဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် စတိုင်ကျပြီး အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး လက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးပါသည်။
ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ခြင်း- PU-သားရေသေတ္တာသည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် အလွယ်တကူဖွင့်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် သေချာပေါက်ကာကွယ်နိုင်သည်၊ သင်၏ကိရိယာများကို သိမ်းဆည်းကာ ၎င်းတို့ကို ဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။
လက်သည်းခြေသည်းအစုံပါ ခြေသည်းညှပ် လက်သည်းညှပ် 12 အပိုင်းပိုင်း
ခြေသည်းညှပ်၊ လက်သည်းညှပ်၊ ထောင့်ဖြတ်လက်သည်းညှပ်၊ ဘက်စုံသုံးကတ်ကြေး၊ ညှပ်ကပ်ညှပ်၊ နားကောက်၊ တစ်ဖက်တည်း နှစ်ဖက်သော တွန်းချောင်း၊ မျက်ခုံးမွှေးညှပ်၊ ခြစ်ဓား၊ လက်သည်းဖိုင်၊ ခေါင်းမဲဆေးထိုးအပ်နှင့် ကွင်းဆက်ဖယ်ရှားသည့် V-shaped တွန်းတို့ ပါဝင်သည် ချောင်း။
ပစ္စည်း- ကတ်ကြေး၊ လက်သည်းညှပ်၊ လက်သည်းခွံဖိုင်၊ v ပုံသဏ္ဍာန် ပွတ်တံ၊ တုတ်တံ၊ စတီးလ်စတီးလ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အမဲစက်အခွံခွာသော ဓား၊ လက်သည်းညှပ် ၃ ချပ်၊ ကာဗွန်သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော နားကြားညှပ်၊ ဇင့်-အလူမီနီယမ် အလွိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အသားညှပ်ညှပ်။
12 pcs manicure pedicure kit သည် ချွန်ထက်သောကိရိယာများကိုကာကွယ်ရန် လှပပြီးစတိုင်ကျသော case ပါရှိ၍ ၎င်းကို လုံခြုံသောလျှပ်တစ်ပြက်အပိတ်ဖြင့် အလွယ်တကူပိတ်ရန် သို့မဟုတ် ဖွင့်နိုင်သည်။